Runako - Bezzia | Bezzia
La runako iri munda wakakura kwazvo, uko vakadzi vanowana nzira yekutaridzika vakanaka, sekuwedzera uye kunzwa kugadzikana. Neichi chikonzero, kubva kumagazini yedu tinonamira kukoshesa kukuru kune ichi chikamu, icho chinofukidza nzvimbo dzakasiyana dzeaesthetics, nguva dzose kubva kune yehunyanzvi maonero uye ichipa zvese matipi ekuita zvidobi uye nhau dzichangoburwa kubva kumakambani ane hukama nenyika ino.
Muchikamu chino, isu tinokuudza matipi ekuti utangezve mativi akasiyana emuviri wako, isu tinokurudzira zvigadzirwa nazvo kuita izvi uye isu zvakare titarise kune vanozivikanwa kuyedza kuteedzera yavo yehunyanzvi makeup, semuenzaniso.
Gadzirisa, bvudzi, zvipikiri, zvinonhuwira kana marapirwo erunako zvichave zviripo muchikamu chino, icho chichagara chiripo uye chichikuudza zvese zvakavanzika zvekutarisika zvakakwana.
Maitiro ekuisa pachirafu: Kurumidza uye anoshanda mazano
kubudikidza Susana godoy inoita 2 mazuva .
Iwe unoda kuziva kuti ungaisa sei sikafu? Yakave imwe yemidziyo mikuru mukunaka kwedu. Nekuti anokwanisa…
Kuvhara tattoo: Iwo akanakisa mazano ekuti utore
Iwe unoda kuvhara tattoo here? Zvichida wakazviita pamwe nekunyengera kwese pasi asi pane nguva inouya apo ...
Makiyi ekutora yakakwana mhangura bvudzi
kubudikidza Toñy Torres inoita 3 mazuva .
Iro bvudzi remhangura riri mukuzara kwese, rinoonekwa zuva rega rega pamakwata anotenderera pasirese, mu ...
Mazamu ekugadzira evatangi
kubudikidza Toñy Torres inoita 5 mazuva .
Makeup inonakidza, kugona, kutamba uye zvakakodzera kune avo vese vanoda kuishandisa senge ...
kubudikidza Susana godoy inoita 7 mazuva .
Iwe unoziva here kuisa blush? Zvinotaridzika kunge zvakapusa uye hazvisi zvekuti isu tinofanirwa kuzvinetsa zvakanyanya, asi mu ...
kubudikidza Susana godoy inoita 1 vhiki .
Iyo eyelashes inofanirawo kugara ichivatarisira, nekuti ivo vachatipa isu kuwedzera kutaura kumeso uye nekuti chikamu chakakosha che ...
Iwe unoda here kuwana nyanzvi pedicure? Saka hapana chakafanana nekutevera nhevedzano yematanho ekutanga uye kuzvimisikidza iwe kuti uzviite zvakanaka mu ...
Matanho akakosha etsika yakanaka yekunaka
kubudikidza Toñy Torres inoita 1 vhiki .
Kutevera yakanaka runako tsika yakakosha kuti unakirwe ine hutano uye yakanaka ganda. Asi nhasi ...
4 makemikari maitiro ekudonha 2021
kubudikidza Toñy Torres inoita Mavhiki e2 .
Autumn iri kugogodza pamusuwo uye nayo, matsva ekugadzira maitiro anouya kuzopa ruvara ku ...
kubudikidza Susana godoy inoita Mavhiki e2 .
Kana paine mafashoni makuru emwaka mutsva, pachavewo nemavara ebvudzi….
Maitiro ekuzora musana bvudzi mune varume
Iwe unoda kuratidza iro razvino bvudzi nebvudzi kumashure muvarume? Kunyangwe zvakajairikawo muvakadzi kuona ...
Kurapa kwembambo nhema
Anus kana kuchena kwepamuviri
Chiso chakazvimba pakumuka, zvikonzero zvacho nemishonga yacho
Hydrogen peroxide mubvudzi, zvayakanakira nezvayakaipira
Kazhinji sei zvinokurudzirwa dhayi
Maitiro ekubvisa hwema hwefodya kubva mubvudzi rako
Bvudzi pane minyatso
Maitiro ekurapa chipikiri
Mashandisiro ekushandisa aloe vera pane bvudzi
Maitiro ekubvisa mafuta kubva kune vhudzi, hunyanzvi hunoshanda chaizvo
Mhando dzebvudzi rinotwasuka uye kuti ndeipi yaunosarudza
Ungaomesa sei bvudzi rako
Maitiro ekudzora kuzvimba kwepimple, akanakisa manomano!
Iwo enamel anonyatsokodzera iwe zvinoenderana neyako ganda toni
Mhando dzevhudzi dzinobata kumeso dzevakadzi vane brunette
Ngano uye chokwadi nezve amoniya-yemahara madhayi iwe unofanirwa kuziva